गगन थापा: यहि ताल होभने कांग्रेस सक्किन्छ, माओवादी केन्द्र ०६४ भन्दा शक्तिशाली बन्छ
उनले पार्टी सकिए आफ्नो र पार्टीका ९ लाख कार्यकर्ताहरूको भविष्य पनि समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
पुस २५, २०७८ १२:१६
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आफ्नो पार्टी अब पनि नसुध्रिए समाप्त हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीद्वारा लिखित पुस्तक ‘कसले सुधार्छ कांग्रेस’ विमोचन कार्यक्रममा मंगलबार नेता थापाले यस्तो बताएका हुन् । यस क्रममा उनले कांग्रेस अब पनि नसुध्रिए समाप्त भएर जाने बताएका थिए ।
उनले पार्टी सकिए आफ्नो र पार्टीका ९ लाख कार्यकर्ताहरूको भविष्य पनि समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । नेता थापाले ९ लाख पार्टीका कार्यकर्तालाई कांग्रेस सकिन्छ भन्ने डर लागेजस्तै नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहालेको मानिसलाईसमेत कांग्रेस सकिन्छ भन्ने आवश्यकता बोध गराउन सके मात्रै त्यसै विजयी बन्ने बताए ।
नेता थापाले चुनावभन्दा परको अवस्था हेरेर अघि बढेमा मात्रै कांग्रेस सबल बन्ने उनको भनाइ थियो । ‘कसले बिगार्‍यो कांग्रेस भन्ने मात्रै होइन, कसले सुधार्छ कांग्रेस भन्ने मात्रै होइन, किन सुधार्ने कांग्रेस ? कांग्रेस सुध्रेन भने के हुन्छ ? सुध्रेन भने कांग्रेस सकिन्छ ।
कांग्रेस सकियो भने के हुन्छ ? सकियो भने म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकोले गर्दा मेरो सबै कुरा पार्टीसँग छ । मलाई चिन्ता लाग्ने सबै कुरा मेरा कुरा भए । हामी ९ लाख पार्टीका कार्यकर्ताहरू छौं । हाम्रो पार्टी नै सकियो भने हाम्रो अस्तित्व जोडिएको कुराको नाश हुने कुरा हो,’ नेता थापाले भने ।
पानी, छिमेकी र द्व’न्द्व
पहाड–पर्वतमा धारा–पँधेरो सुकेनास भएको पनि छर्लंग देख्न थालियो । बर्खा लागेपछि मुल फुट्थ्यो, सफा पानी आउँथ्यो । धेरै महिनासम्म पिउने पानी पाउँथ्यौं, सरकार नै कहिल्यै नपुगेका गाउँ–घरमा । भारतमा हरेक व्यक्तिलाई पानी प्राप्यता सन् १९५२ मा ५१७७ क्युबिक मिटर प्रतिवर्ष थियो, बिस्तारै घटेर आज १४०० पुग्यो, जो सन् २०५० मा अति नै तल ११०० क्युबिक मिटर पुग्ने सम्भावना देखाइएको छ ।
अर्कोपट्टि एक किलो धान उमार्न २८५० लिटर, एक किलो कपास १८६९४ लिटर र एककिलो दूध उत्पादन गर्न १३६९ लिटर पानीको खपत गरिएको नापजोख निकालिएको छ । अर्थात् खेतीपानीमा पानीको प्रयोग अति नै अदक्षतापूर्ण हुन्छ । राष्ट्रभरि नै कृषकहरूलाई बिजुली मुफ्त दिइँदा कतिपय क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानी यति निकालियो कि पन्जाबमा पानी पाउन लगभग १४० देखि १९० फिटसम्म खन्नु नै पर्ने भो ।
भारत–नेपालवरिपरिका क्षेत्रहरूमा चार प्रकारका पानीमाथिको द्वन्द्व अघि आएका छन् । देशभित्रको झैझगडा दक्षिण भारतको काभेरी नदीमाथि र पन्जाब–हरियाणाको रवि वियाजमाथि । सर्वोच्च न्यायालयले हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्वलाई रोकथाम गर्ने प्रयास गरे पनि हिंस्रक घटनाहरूले यी क्षेत्रहरू रुमलिँदै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्रसँगको खिचातानी त अझै प्रबल रूपमा अघि आएको छ ।
नेपाल–भारतबीच कैयन् दशकदेखि चलिआएको कोसी–गण्डक, भारत–पाकिस्तानबीच सिन्धु नदी, भारत बंगलादेशबीच गंगा–टिस्टा अनि फेरि भारत–चीनबीच ब्रह्मपुत्र नदीमाथिको वादविवाद । स्थानीय जिल्ला–गाउँमा अर्कै प्रकारको खिचातानी— राष्ट्रभरि नै आर्थिक उदारवादी नीति अपनाएपछि पानीलाई पनि बिजुली उत्पादन वितरणजस्तै निजीकरणको डोकोमा हालेपछि प्रकृतिले दिएको निःशुल्क सुविधालाई पनि लगभग किन्नु नै पर्दा तनाव बढ्दै गएको देखेका छौं ।
भारतको चिन्ता तीनपक्षीय छ । प्रथमतः राष्ट्रभित्र नै बढ्दो पानीको अभाव कसरी समेट्ने भन्नेमा अनेकन प्रयास जारी छन् । नदीको बहावलाई बंग्याएर अर्को नदीसँग जोड्ने प्रयास (उत्तरप्रदेश–मध्यप्रदेशका केन नदी आदि), विभिन्न नयाँ जल वितरण एवं खपत कार्यक्रम (जलजीवन मिसन आदि) अनि विभिन्न बाँधहरूबाट सहर आदिमा पानी वितरण (तेहरी परियोजना आदि) ।
योबाहेक पानीलाई ठीकसँगले प्रयोग गरून् भनेर विभिन्न प्रकारका करहरू लगाइँदै छ । यी प्रयासहरू हुँदाहुँदै राष्ट्रव्यापी पानीको अभाव र हाहाकार एउटा ठूलो राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दा हुँदै छ । दोस्रो, भारतमा प्रवेश गर्ने नदीहरू प्रायः हिमालय क्षेत्रबाट आउँछन्, नेपालबाट गंगा, कोसी, महाकाली, गण्डक आदि चीनबाट सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि अनि भोटाङबाट सुनकोस आदि । यदि भोटाङ, चीन र नेपालसँग नदीको पानी वितरणबारे खिचातानी गहिरिएको खण्डमा के होला, त्यस्तो स्थिति कसरी सम्हाल्ने ?
अर्कातिर भारतमा बगिसकेर यी नदीहरू छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र पाकिस्तानमा पस्दा र यी राष्ट्रहरूले पानीमाथिको आफ्नो अडानलाई अझ तीव्र बनाई आआफ्ना राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दा के होला ? अनि तेस्रो चिन्ता मौसम परिवर्तनले हिमशिखरहरूमा परेका आघातसँगसँगै सिमानावारिपारि नदीले ल्याएका प्रकोपहरू कसरी सम्हाल्ने ? चीन, नेपाल र भोटाङमा नै नदीको बहाव बर्खा झरीदेखि अरू रहेका महिनाहरूमा सुकेर गए भारतमा पानीको अभाव अझ गहिरिँदै जाने नै छ ।
जलविद्युत्, खेतीपाती, जलसिँचाइ, पेय जल, जलमार्ग आदिमा प्रभाव पर्ने छ, तब फेरि के गर्ने ? छिमेकी राष्ट्रसँग एउटा नयाँ प्रकारको टकराव हुने नै भयो । चोखो पानी र संस्कृति, पानी र जीवनयापन, पानी र उद्योगधन्दा अनि पानी र खेतीपाती, आफैंभित्र एउटा कहिल्यै नदेखेको द्वन्द्व र विरोधाभास देखा पर्नेछ ।
तसर्थ भारत, नेपाल सबै छिमेकी राष्ट्रहरूले नयाँ सोच सग्लो रणनीति, वैज्ञानिक सांख्यिकी, आधुनिक संस्था एवं सामूहिक गतिविधिको मार्ग अपनाउनैपर्ने भएको छ ।
पानीको साँघुरो परिभाषा त्यागेर मौसम परिवर्तनले ल्याउँदै गरेको आघातसँग सामूहिक ढंगमा जुझ्ने रणनीति, विश्वका कुना हाम्रा कन्दरा, प्रयोगशालामा रहेको सूचना सांख्यिकीको लोककेन्द्रित आदानप्रदान र विज्ञान–ज्ञान प्राविधिकीकेन्द्रित संस्थाहरूको निर्माण भए मात्रै यस भीषण समस्यासँग जुझ्न सकौंला ।
राजनीतिक सोचाइमा नै हेरफेर आउनुपर्छ किनकि यो पानीको महामारीले कोभिडले ल्याएको महामारीभन्दा अझै विकराल रूप धारण गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा चीन धेरै अघि बढेको राष्ट्र हो ।
माथि बसेर मेकोङ, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, यांङ्जे, ह्वाङ होजस्ता विशाल नदीका उद्गमस्थल रहेर पनि पानीमाथि अन्वेषण, नदीलाई कज्याउने उपायहरू, बाँध–बिजुली परियोजना र जल वितरण आदिमा चीनमा निकै अघि रहेको प्रवृत्ति र यन्त्र तन्त्रहरू देखिएका छन् ।
भारतले विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सन् १९६० मा पाकिस्तानसँग गरेको सिन्धु (इन्डस) नदी र भारत–बंगलादेशबीचको सन् १९९६ मा भएको गंगा नदीको सम्झौतालाई सफल र दूरगामी दुईदेशीय पानीको व्यवस्थापन मानिन्छ ।
भारत–पाकिस्तानबीचको तीनवटा घमासान युद्धपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तानी आतंकवादीको हमलापछि ‘पानी र रगत सँगै बग्दैन’ भनेपश्चात् पनि सिन्धु नदीको पानीको वितरण गत ६० वर्षमा लगभग सुमधुर एवं सुचारु ढंगमा सञ्चालन भयो ।
भारतले जन्मु–कश्मीरमा यसै सिन्धु नदीमाथि विभिन्न बिजुली परियोजनाका निम्ति बाँधहरू बनाउँदा पाकिस्तानले विरोध गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगहरू गठन गरिए र समाधानका मार्गहरू अघि ल्याइए । अहिलेसम्म पनि दुई देशीय इन्डस जल आयोग नियमित रूपमा भेटघाट गर्छन् ।
बंगलादेशसँग भारतको गंगा–ब्रह्मपुत्र–टिस्टा आदि नदीहरूबारे निकै मतभेद हुँदाहुँदै पनि सन् १९९६ मा गंगा नदी सम्झौता भएपछि मैत्रीभाव अझै अघि बढ्यो ।
भारतका तर्फबाट तिनताकका बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले अति नै सराहनीय भूमिका निर्वाह गरे । बंगालभित्रै रहिआएको व्यापक विरोधलाई बसुले अति नै परिपक्व ढंगमा सुल्झाए र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासम्मलाई यो सम्झौताबारे सम्झाए, बुझाए ।
यो सम्झौता आजसम्म पनि बिनाहिचकिचाहट र तनावरहित उभिएको कारणमध्ये सबैभन्दा प्रमुख खाँबो हो— यस सम्झौता गर्दा हालिएका र गुथिएका वैज्ञानिक–सांख्यिक र अन्य प्रमाणहरू । अति नै वैज्ञानिक ढंगमा यस सम्झौतामा गंगा नदीको प्रवाहलाई ऐतिहासिक ढंगमा नापजोख गरियो र त्यस्तै प्रकारले पानी वितरणको फर्मुलाहरू अघि राखियो ।
सन् १९४९ देखि सन् १९८८ सम्मको नदीमा पानीको बहावको सांख्यिकी र सूचनासँगसँगै यस सम्झौतामा पहिलो पटक समानता, चोखो खेल र एकार्कालाई कहीँ पनि आघात–चोट नपुर्‍याउने प्रतिबद्धता संलग्न गरियो ।
आजसम्म पनि पानीको कम्ती बहावको समय (मार्च–मई) मा दुई राष्ट्रका अधिकारीहरूले दुवै हार्डिन्ज र फरक्का पुलमा पानी बहावको हरेक दस दिनमा नापजोख गरेपछि वितरणमा तलमाथिको व्यवस्थापन गर्छन् । सन् २०२६ मा यस सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरिने व्यवस्था पनि छ ।
यस सम्झौताअन्तर्गत एउटा प्रमुख धाराको चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन, एउटा प्रशासनिक कारणले अर्को पर्यावरण–पारिस्थितिकीका कारणले । यस सम्झौताअनुसार गंगामा पानीको बहाव बढाउनका निम्ति अबउसो गंगानदी अवस्थित माथितिरका राज्यहरू विहार र उत्तरप्रदेशले कुनै नयाँ पानी खिच्ने कार्यहरू गर्ने छैनन् ।
र अर्को भोटाङको सुनकोस नदीलाई उत्तर बंगाल हुँदै बंग्याएर फरक्का बाँध पुर्‍याइनेछ । दुइटै हुनै नसक्ने प्रबन्ध थिए । उत्तरप्रदेश र विहारका गंगा नदीस्थित समुदायलाई गंगाको पानी अझै चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाउनु असम्भव नै थियो ।
अनि सुनकोसलाई बंग्याएर बग्न दिँदा उत्तर बंगाल र आसामबीचको पशुप्राणी मार्ग मात्रै छताछुल्ल नभएर त्यहाको पर्यावरण नै भताभुङ्ग हुने वैज्ञानिक–विशेषज्ञहरूले राय दिएपछि त्यो कथा त्यही टुंगियो ।
भारत–नेपालबीचको पानी बहाव र भागबन्डा भने ऐतिहासिक रूपमा नै खिचातानीमा मुछियो । कोसी बाँधमाथिको सन् १९५४, गण्डक बाँधमाथिको सन् १९५९ र महाकाली नदी बारेको सन् १९९६ को सम्झौता जहिल्यै पनि वाद–विवाद र द्वन्द्वमा नै अल्झिरह्यो ।
धेरै मुद्दामा भारत र नेपाल सहमत हुनै सकेनन् कहिल्यै पनि । उदाहरणार्थ नेपाल पक्षले अघि राखेको रेकर्डअनुसार कोसी बाँधको सर्वोच्च क्षमता ९.५० लाख क्युसेक पानी हो । पूर्वीय नहर जो सम्पूर्ण रूपमा भारतीय क्षेत्रमा छ, त्यसले ६.१२५ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्छ । अर्कातिर पश्चिमी नहर प्रायः ३५ किलोमिटर नेपाल क्षेत्रमा बग्छ र त्यसपछि भारतभित्र पस्छ ।
यस पश्चिमी नहरले नेपालका केवल ११.३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्छ र भारततिर भने ३.५६६ लाख हेक्टर सिँचाइ गर्छ । जमिन सिँचाइमा मात्रै पनि भारतले यति व्यापक–बृहत् रूपमा भारतले फाइदा पाएको र नेपालले केही नपाएको बारेमा धेरै चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको छ ।
नेपालको अडानअनुसार यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिँदा नेपालमा कुनै विशेषज्ञ र वैज्ञानिक तकनिकी संस्थाहरू नभएका कारणले भारतले चाहेअनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । भारतको भने आफ्नै सांख्यिकीमा आधारित अडान छ ।
बंगलादेशसँग टिस्टा नदीको पानीबारे निकै चर्किंदो वादविवाद जारी नै छ । बंगलादेशमा भारतका लगभग ५४ नदी प्रवेश गर्छन् । टिस्टा नदीमा बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी अघि बढ्नै मान्दिनन् । यस नदीमा सम्झौता भएको खण्डमा उत्तर बंगालका जिल्ला गाउँहरूले पानी पाउँदैन भन्ने अडान उनको छ ।
अप्ठ्यारै कुरो, भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकारबीचमा नै घरेलु स्तरमा मतभेद छ । भारत सम्झौतातिर लाग्नासाथ बंगालले लम्की थाप्छ । धेरैले भन्छन्, ‘यस सम्झौता नभएको मूल कारणचाहिँ टिस्टामा बर्सेनि बहने पानीको सांख्यिकी नै वैज्ञानिक रूपमा कसैसँग छैन ।’
अर्कातिर सिक्किममा यही टिस्टा नदीमाथि नै बीभत्स रूपमा निर्माण गरिँदै गरेका २०–३० वटा जलविद्युत् परियोजनाचाहिँ फेरि कुन आधारमा बन्दै छन् । पानी बहावको सांख्यिकी नै नभए, फेरि कुन आधारमा बाँधको उचाइ, गहिराइ, चौडाइ आदि तय गरियो ? प्रश्नैप्रश्न छन् ।
अर्कातिर यदि भारत–बंगलादेशबीच टिस्टा नदीबारे सम्झौता गरिँदा बंगाल सरकारलाई सामेल गरिन्छ भने सिक्किम सरकारलाई किन संलग्न गरिँदैन ? सिक्किम नै टिस्टा नदीको उद्गमस्थल हो अनि ८० प्रतिशत टिस्टाको प्रवाह नदी सिक्किमभित्र बग्छ । यी दुई राष्ट्रको सम्झौतामा सिक्किमलाई संलग्न गरिएको खण्डमा, कूटनीति नै अर्थपूर्ण हुन्छ ।
पानी केवल खोला–नदीमा बग्दैन । नदीको आफ्नै जलाशय (बेसन) हुन्छ । भारत एवं छिमेकी राष्ट्रहरूले नदीको कुरो नगरेर गंगा–सिन्धु–ब्रह्मपुत्र जलाशयको मार्ग अपनाए, क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने हुन्छ । चीन र दक्षिण–पूर्व एसियाका राष्ट्रहरू थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस र बर्माबीच मेकोङ नदीको जलाशयमाथि नै चर्चा–परिचर्चा हुँदै छ ।
चीनले बाँधहरूको लस्कर नै तिब्बतमा लगाउँदा, तलतिर रहेका भारत–बंगलादेशमा ब्रह्मपुत्र जलाशयको आधारमा गरिएको पानीमाथिको छलफल उपयोगी एवं प्रभावशाली हुनेछ । कारण जलाशयले मौसम परिवर्तनका आघातहरूलाई मात्रै नसमेटेर, पर्यावरणमाथिको चोटले जन्माएका शरणार्थीहरूका ताँतीलाई पनि केही न केही समाधान अघि राख्नेछ ।
पानीबारे कूटनीतिमा, ठूलो राष्ट्रको ठूलै पहिचान र सार्वभौमिकता अनि सानै राष्ट्रको सानै भन्ने सोच अघि ल्याएर नै चीन, अमेरिका, भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आघात पुर्‍याए र तनावको मार्गमा हिँडाए । ठूलै नदीको मात्रै कुरा गरे ।
ससाना नदीहरूले कसरी सीमानाका वल्लो पल्लोपट्टिका दुई राष्ट्रका नागरिक–समुदायलाई सौहार्दपूर्ण ढंगमा एकत्रित बनाए भन्ने सुमधुर र मीठो अनुभवको कथा–व्यथालाई बाड्नै दिएनन् । अबोप्रान्त फेदको कूटनीति गर्न जरुरी छ, टप्पोको होइन ।